Nagu saabsan - Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd.
Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2007, oo ku taal magaalada Shijiazhuang oo ah caasimada Gobolka Hebei iyo qaybta xudunta ee Beijing Tianjin iyo Hebei waxayna leedahay faa'iido gaadiid ku habboon. Shirkadeenu waa shirkad casri ah oo kiimiko farsamo leh oo cilmi baaris & horumarin, wax soo saar iyo iibinba leh.
Shirkadeenu waxay leedahay awood farsamo oo xoog leh, qalab casri ah, nidaam maareyn tayo oo adag iyo adeeg tayo sare leh kadib iibka, waxay u hogaansantaa "macaamilka marka hore oo horay u sii wad" falsafada ganacsiga waxayna ku adkeysaneysaa daacadnimada shirkada sii jiritaankeeda. Dhammaan waxa loogu talagalay qanacsanaanta macaamiisha, dhammaantoodna waa horumarka caafimaadka ee muddada-dheer ee shirkadda. 10-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan si adag u maareynay nidaamka ganacsiga oo dhan, waxaan diirada saareynaa faahfaahin kasta, waxaan siineynaa macaamiisha adeegyo dhan walba leh sida wax soo iibsiga, R & D, xakameynta tayada, maamulka saadka iyo wixii la mid ah, oo noqo mid lagu kalsoonaan karo shirkadda iskaashiga iyo lamaanaha macaamiisheena. Maalmahan waxaan sameysanay noocyo waawayn, baaxad weyn, qaybo dhameystiran, shahaado la sifeeyay, qiime lagu daray iyo silsilad wax soo saar tiknoolajiyad sare leh .Waxaa jira taxane dhowr ah oo ay ka mid yihiin wax soo saarka dawada, waxyaabaha lagu daro fasalka cuntada, darajada warshadaha, heerka bacriminta iyo wax soo saarka macdanta.
Shantii sano ee la soo dhaafay, shirkaddu waxay hirgelisay istiraatiijiyaddii "tagitaanka" si xoog leh. Waxaan ka dhignay laamaheena Hubei China, Vietnam iyo Mexico, taasoo ka dhigeysa suuqdeena iyo shabakadeena iibka mid aad u dhameystiran. Shirkaddayadu waxay sii wadi doontaa inay u hoggaansanto dejinta istiraatiijiga ah ee warshadaha kiimikada ganaaxa mustaqbalka iyo fikradaha tartanka ee kala-soocidda wax soo saarka ee aan la beddeli karin, waxayna ku dadaalaysaa inay noqoto hoggaanka warshadaha kiimikada Shiinaha.
Iyada oo loo adeegsanayo kheyraadka ku saabsan faafitaanka macluumaadka ganacsiga caalamiga ah, waxaan soo dhaweyneynaa rajada laga qabo meel kasta oo ka mid ah shabakadda iyo qadka. In kasta oo ay jiraan waxyaabo tayo sare leh oo aan bixinno, adeegga wadatashiga wax ku oolka ah ee qanciya waxaa bixiya kooxdeena adeegga iibka ka dib. Liisaska sheyga iyo xuduudaha faahfaahsan iyo wixii macluumaad kale ah ee weil ayaa laguugu soo diri doonaa adiga waqtiga ku habboon su'aalaha. Marka fadlan nala soo xiriir annaga oo noo soo diraya emayl ama na soo wac markii aad wax su'aalo ah ka qabtid ururkeenna.